Akhriso) Sida loogu tuntay qodobka 69aad ee loo cuskaday Xil-ka qaadista Khayre | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Akhriso) Sida loogu tuntay qodobka 69aad ee loo cuskaday Xil-ka qaadista Khayre
Akhriso) Sida loogu tuntay qodobka 69aad ee loo cuskaday Xil-ka qaadista Khayre
Guddoonka Baarlamanka ayaa shaaciyey maanta in golaha shacaku uu kalsoonida kala laabtay Xukuumadda Somalia ee uu hogaamiyo Khayre oo uu ku eedeeyey inay ku fashilantay qabashada doorashada guud, federaalaynta iyo qodobo kale.
Waxaa uu saacad gudaheed ku shaaciyey in RW khayre laga qaaday xilka, ka dib mowshin laga keenay, ayna u codeeyeen arrintaas ku dhowaad 170 Xildhibaan, iyadoo aaney dhicin dood Baarlamanku ka yeeshay kalsooni kala noqoshada iyo fursad loo siiyey Xukuumada iney isdifaacdo taasoo khilaafsan qodobada dastuurka ee dhigaya habraaca loo marayo xilka qaadista Raisul Wasaaraha, waxaana arrintan ka dhashay Su’aalo dhinaca sharciga ah.
Mursal ayaa xilka ka qaadista Khayre u cuskaday Qodobka 69-aad ee dastuurka kaasoo u qora sidatan hoose.
1-Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah wuxuu leeyahay awood sharci-dejin oo ah:
2-Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka waxaa kale oo uu leeyahay awoodahan dheeriga ah ee soo socda:
Qodobka 2-aad faqradiisa (C) ayaa dhigaya in Xukuumaddu xaq u leedahay in loo yeero oo ay soo hor istaagto Baarlamanka, kana hadasho waxa loo haysto, iyadoo markaa kaddib ay iman karto in codka kalsoonida loo qaado, kuwaasoo aan dhicin sida ku cad faqrada (d) & (e) ee isla qodobka 69aad.
Siyaasiyiin badan iyo dadka falanqeeya siyaasada Somalia ayaa u arka in xilka ka qaadista Raisul wasaaraha aan la waafajinin qodobada dastuurka, ayna u muuqatay iney u dhacday sidii afgembi oo kale, iyagoo ku sifeeyey tii ugu deg dega iyo yaabka badneyd ee xilka looga qaado Raisul Wasaare Soomaaliyeed oo xil haya.
Previous articleMadasha Xisbiyada oo ka hor yinid sharcidarada Xilka looga Qaaday Ra iisal wasare Kheyre
Next articleRa iisal wasare Ku Xigeenka oo Xil ka qaadis adurba sameeyey
Explosive Ordance truck en route to Mogadishu seized
Dowlada Federaalka oo Dhaliil kala kulantay Tacsiyeent Fanaanka weyn ee Cabdi...
Halkaan ka Daawo Wasiirka Arimaha Dibada Soomaaliya oo ka hadlay...